5 ဥရောပရှိ Charm Old City Centre အများစု | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပရှိ Charm Old City Centre အများစု
ဥရောပရှိချစ်စရာကောင်းသည့်မြို့ဟောင်းအဟောင်းများသည်ဥရောပ၏သမိုင်းကြောင်း၏အံ့သြဖွယ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်. ထူးဆန်းသောအိမ်များ, မြို့လယ်ခေါင်ရှိအထင်ကြီးလောက်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ, ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောနန်းတော်များ, နှင့်ဗဟိုရင်ပြင်, ဥရောပမြို့ကြီးများ၏မှော်ထည့်ပါ. အဆိုပါ5ဥရောပရှိဆွဲဆောင်မှုရှိသောမြို့ဟောင်းအဟောင်းများသည်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်မပျက်မပျက်တည်ရှိနေခဲ့သည်.
အရောင်များ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်ဒဏ္legာရီနေထိုင်တိုင်းနှင့်မြို့တိုင်း၌ရပ်နေစောင့်ရှောက်. ပရာ့ဂ်မှ Colmar အထိ, ဥရောပ၏အဟောင်းမြို့စင်တာများသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုလုံးဝတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်, နှင့်အနည်းဆုံးတ ဦး တည်းရှည်လျားတနင်္ဂနွေ.
1. ပရာ့ဂ်မြို့တော်စင်တာ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ပရာ့ဂ်မြို့ရှိအဟောင်းမြို့လယ်ခေါင်သည်အလွန်လှပသည်. မြို့လယ်ခေါင်ကတော်တော်ကြီးမားတယ်, ချစ်စရာကောင်းတဲ့ bistros အတူ, ကဖေး, နှင့်စားသောက်ဆိုင်. စတုရန်းသည်လူတို့၏စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်, အရသာ ချက်ဘီယာ, နှင့်နက္ခတ္တဗေဒနာရီပြပွဲစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ဝက်အူချောင်းချဉ်. အဟောင်းကိုမြို့လယ်၏မီးမောင်းထိုးပြဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေါ့, နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်. ပတ်လည်နာရီတိုင်းရင်ပြင်တွင်လာရောက်လည်ပတ်သော ists ည့်သည်များမြင်တွေ့ရသည့်အခါသင်အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ.
ပရာ့ဂ်မြို့ရှိရှေးဟောင်းမြို့လယ်ခေါင်၏ထူးခြားချက်မှာလှပသောအဆောက်အအုံများဖြစ်သည်. Baroque စတိုင် ဘုရားကျောင်းစိန့်. က Nicholas နှင့် Tyn မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ Gothic 14 ရာစုဘုရားကျောင်း, လွဲချော်ခံရဖို့မရှိကြပေ. ပရာ့ဂ်မြို့ရဲ့မြို့တော်ဟောင်းလည်းတည်ရှိပါတယ် ခရစ်စမတ်စျေးကွက်ဖြစ်လာသည်, နှင့်ချစ်စရာကောင်းသောမြို့လယ်ခေါင်သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောနတ်သမီးပုံပြင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်.
Salzburg ရှိမြို့ဟောင်းအဟောင်းသည်အလွန်လှပပြီးထူးခြားသည်. အီတလီနှင့်ဂျာမန်ဗိသုကာတစ် ဦး ရောနှော, 19 ရာစုစတိုင်လ်မှအလယ်ခေတ်, ဥရောပတွင်အဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမြို့တော်ဗဟိုချက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ. Salzburg, ထို့အပြင် Altstadt အဖြစ်လူသိများ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အအမွေအနှစ် site နှင့် ဗီယင်နာမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေ့ - ခရီးစဉ်, ရထားသုံးစွဲနိုင်.
Salzburg ရှိမြို့အဟောင်း၏ဗဟိုသည်မင်းသား၏အိမ်ဟောင်းဖြစ်သည်, ၏ Residenz ပြည်နယ် 180 အခန်းများ. Residenz စတုရန်းသည် Zalsburg ၏လှပသောခရစ်စမတ်စျေးကွက်ကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်, နှင့်တိုက်ရိုက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ. လည်း, မြို့ဟောင်းအဟောင်းကိုလှည့်လည်သွားဖို့သေချာပါစေ, အဆိုပါ Residenz ရန် စမ်းရေတွင်း, မိုဇတ်ရဲ့ကလေးဘဝအိမ်, နှင့် Salzburg ဘုရားရှိခိုးကျောင်း.
Salzburg မြို့သည် Alpes ၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်, အဆိုပါ spiers နှင့်အတူ, နှင့်နောက်ခံအတွက်အမိုးခုံး. ဥရောပတစ်လွှားသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောထိန်းသိမ်းထားရှိသည့်မြို့ဟောင်းကြီးများအနက်မှတစ်ခုသည်ကဒ်ပြားကိုကြည့်ရှုခြင်းအားထည့်သွင်းထားသည်.
3. Bruges Old City Centre, ဘယ်လ်ဂျီယံ
Brugge, ငါတို့ရှိသမျှသည်က Bruges ကိုသိသကဲ့သို့, ချစ်စရာကောင်းသောမြို့ဟောင်းအဟောင်းနှင့်အခြားအံ့ဖွယ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. တစ်ချိန်ကဗိုက်ကင်း၏အိမ်, ဒီနေ့က ဥရောပရဲ့ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်တစ်ခု. အသုံး’ လမ်းကျဉ်းနှင့် cobblestone လမ်းများ, ရောင်စုံအိမ်များ, တူးမြောင်းများသည်၎င်းကိုယူနက်စကိုအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်စေသည်.
သငျသညျ Bruges အတွက်အဟောင်းကိုမြို့အလယ်ဗဟိုပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်တဲ့အခါမှာ, သငျသညျလှပသောဇာကိုပူဇော်ကြောင်းနည်းနည်းဆိုင်များသတိထားမိပါလိမ့်မယ်. အသုံး’ ဇာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားသည်, ချစ်စရာကောင်းတဲ့ pics ဆောင်ခဲ့အပြင်၌, ဇာ Bruges မှသင်ယူဆောင်လာနိုင်သောအံ့သြဖွယ်အမှတ်တရလက်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်.
ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်ဘရူဂူကိုသွားနိုင်သည်, ပြီးတော့သင်ကမြို့ကိုရထားနဲ့သွားလေ့လာနိုင်တယ်, ခြေလျင်, သို့မဟုတ် လှေစီး. Markt သည်ခေတ်များတစ်လျှောက်သင်၏ခရီးကိုစတင်ရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်, နှင့် Bruges ၏ထူးခြားသော Belfry ဆက်လက်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော် Bruges ၏ဘုရားကျောင်း. သငျသညျအထကျကနေချစ်စရာကောင်းအဟောင်းမြို့အလယ်ဗဟိုလေးစားလိုလျှင်, ထို့နောက် Belfry မျှော်စင်မှထူးခြားသောအမြင်များကိုပေးသည်.
4. Colmar, ပြင်သစ်
Colmar မြို့၏ရှေးဟောင်းမြို့လယ်ခေါင်သည် Alsace သို့လည်ပတ်ရန်အချစ်ဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ရှေးဟောင်းမြို့လယ်ခေါင်သည်ဥရောပရှိထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအဟောင်းဆုံးမြို့ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အိမ်များ’ မျက်နှာစာများသည်အလယ်ခေတ်မှသူတို့၏ပို့စကတ်ကဲ့သို့သောကျက်သရေနှင့်အလှအပကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်, အစောပိုင်း Renaissance ဒြပ်စင်များကိုမီးတောက်လောင်နေသောဗိသုကာပညာတွင်တွေ့နိုင်သည်.
Colmar စပျစ်ဥယျာဉ်များကဝိုင်းရံထားသည်, နှင့်အဟောင်းမြို့စင်တာများမှဝိသေသလက္ခဏာများ, သငျသညျလှပသောဘုရားကျောင်းစိန့်မာတင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်. လက်မလွတ်ရသေးသောနောက်တစ်ခုမှာ Colmar ရှိ Little Venice ဖြစ်သည်, ဘယ်မှာသင် quaint နည်းနည်းစားသောက်ဆိုင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, တံတားများ, နှင့်စူးစမ်းဖို့တူးမြောင်း.
Colmar မြို့ငယ်၌နေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်, ဒါပေမယ့် Colmar မြို့ရဲ့မြို့တော်ဟောင်းကိုလည်းသင်ပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်, Strasburg ကနေတစ်ရက် - ခရီးစဉ်အပေါ်. အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစပျစ်ဥယျာဉ်များသည်ပြင်သစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည် မြို့ချိုး နှင့် တနင်္ဂနွေထွက်ပြေး.
Zurich မှ Colmar ရထားစျေးနှုန်းများ
Stuttgart မှ Colmar ရထားစျေးနှုန်းများ
5. Florence Old City Centre, အီတလီ
Florence ၏ Duomo, ၎င်း၏မျှော်စင်နှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်အတူ, Florence ရှိမြို့အဟောင်းကိုကျက်သရေရှိစွာအုပ်ချုပ်သည်, ကဗျာ, နှင့်အလှအပ. Florence ရှိမြို့လယ်ခေါင်ဟောင်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည်5ဥရောပ၌အလှဆုံးနှင့်သိသိသာသာလှပသည်. ဤယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာကိုစတင်ရန် Piazza del Duomo သည် Piazza Della Signoria သို့စတင်သည်.
သင် Florence အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စိတ်အားထက်သန်လျှင်, ထို့နောက် Uffizi ပြခန်းနှင့် Boboli ဥယျာဉ်များသို့ဆက်သွားသင့်သည်. ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်မြို့၏သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအနုပညာမှတစ်ဆင့်သင်ယူရန် သာ၍ ကောင်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ. Florence သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအီတလီမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, သင်တစ် ဦး panini ဖမ်းပြီးဘယ်မှာ, ညာဘက် Duomo အပြင်ဘက်. အချိန်ရှိရင်, ထို့နောက် Duomo ထိပ်ကိုတက်, အဘို့ ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း အီတလီမှာအလှဆုံးမြို့တမြို့၏.
Florence ရဲ့အဟောင်းမြို့လယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ဗင်းနစ်ကနေနေ့ကခရီး. သို့သျောလညျး, သင်အနည်းဆုံးရည်စူးသင့်ပါတယ်2Florence ၏နေရာများနှင့်ကျောက်မျက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ရက်ပေါင်းများစွာ.
သငျသညျအချိန်အလယ်ပြန်ခေတ် Renaissance သို့ပြန်သွားချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဤ5ဥရောပရှိမြို့ဟောင်းအဟောင်းများသည်စံပြခရီးစဉ်ဖြစ်သည်. ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဤမြို့၏အလှပဆုံးမြို့ကြီးများသို့သင်ရထားဖြင့်ရထားဖြင့်စီစဉ်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပရှိ Charming Old City Centres ၅ ခု” တွင်သင်၏ embed လုပ်ရန်လိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အဆိုပါ/က/မ/ႏပိုပြီးဘာသာစကားများ.
မြို့လယ်ခေါင် Fairytaletowns နေမင်း နင် ရထားခရီးသွား TravelColmar travelflorence ပုဂံ TravelSalzburg